Bakhat Bahadur Thapa | Nepali Stories
Bakhat Bahadur Thapa
Bakhat Bahadur Thapa – Bikas
बखतबहादुर थापा – विकास
प्रकृतिले मान्छेलाई जति लोभ्याउँछ, मान्छेले मान्छेलाई त्यति नै तर्साउँछ ।
“ए भुरा हो,” एक प्रौढ चिच्याउँदै आयो, “तिमीहरू पढ्न आएका कि कुइरेहरूको वरिपरि झुम्मिन ?” तर, विचरा ती बालबालिकाहरू ! शिक्षकहरू स्कुलमा भए न उनीहरू पनि कक्षामा हुन्छन् ! “तलब थापेकै दिन एक कौडी बच्दैन भने घाँटी सुकाउनुको औचित्य के ? समाज सेवा गर्ने बानी परिसक्यो, त्यो त्यसै छाड्न पनि मिलेन ।” अधिकांश शिक्षकहरूको यो साझा धारणा थियो । उनीहरू हाजिरी बहीमा उपस्थिति जनाउनासाथ ‘समाजसेवा’ मा लागिहाल्थे । हाम्रो देशमा इच्छा अनुसारको ‘समाजसेवा’ चल्छ, जसका थुप्रै शाखा–प्रशाखा छन्ः नेताहरूको उछित्तो कढाइ, गुटबन्दी, कुख्यात मान्छेको अनुसरण, उद्दण्डता, जुवातास, आदि आदि ….. ।
अरू सहयात्री पनि त्यो कुइरेलाई आफुले जानेबुझेको सम्झाउने–बुझाउने प्रयत्नमा जुटे । दाता झन् गम्भीर देखिए उनका ओठतालु सुक्दै आइरहेका थिए । रिंगटा लागजस्तो भयो । उनले आफुलाई चुस्त पार्न ‘हाउ…’ गरेर सबैलाई तर्साइदिए । गाउँलेहरू एकअर्कालाई हेरेर हाँसे र सोचे, भूत–पे्रतको मामिलामा कुइरे हामीभन्दा जानकार रहेछ । तर, गाउँलेले भनेजस्तै दाताको टाउको भारी हुँदै थियो; ओठमुख सुकिरहेका थिए; जे देख्यो खाइदिऊँ जस्तो भोकतिर्खा लाग्न थाल्यो । ब्लड पे्रसर घटेझैं मुटु हल्लिने र कसैले पछाडिबाट धकेलेजस्तो पनि हुनाले उनी बेलाबखत झसङ्ग–झसङ्ग हुन थाले । चाही–नचाही उनको सम्झनामा त्यही पाल्तो आइपुग्थ्यो । टपरी, एकताले रोटी, बाँसमा बाँधिएका काला ध्वजा, छरिएका चामल, सिस्नु र रगतका थोपा… । उनी गम्भीर हुँदै बर्बराउँथे, “पा… पाल्तो !”
“तिमी प… पत्याऊ न, आज मलाई सन्चो छैन,” दाता बोल्दा पनि लरबराउन थाले ।
“ओ… ओ… ओओ…,” माइलो चर्को स्वरमा कराउँदै जोड–जोडले काम्न थाल्यो । उसमा देवता चढेपछि सबैले सल्लाह गरेजस्तो उचित समयमा सामान आइपुग्यो । तुरुन्तै एक थाली चामल आयो । उसले चामललाई मुठ्याउँदै चारैतर्फ छर्न थाल्यो । घरीघरी मुठीभरि चामल लिएर “गुनमुन गुनमुन… भाग !” भन्दै दाताको जीउमा हिर्काउन थाल्यो । दाता उठ्न खोज्थे, तर सबैले झ्यापझुपै अँठ्याइहाल्थे । उनले बोलेको सुन्ने कोही भएन । यत्तिकैमा एउटा मकलमा रापिलो आगो, एक कचौरा तेल, पन्यूँ र एक झुप्पा कलिलो सिस्नु आइपुग्यो ।
“या… या… या… या…,” यहाँनेर धामीको भाषा पनि फेरियो, बुझेर हो वा नबुझेर । देवता भएको नाताले कुइरेकै भाषा बोल्न चाहन्थ्यो कि ? उसले काम्दै उठेर दातालाई एक चक्कर लगायो अनि लामो सुस्केरा हाल्दै भन्यो,
“म योजति सक्दिनँ ।” गाउँलेहरू छक्क परे । आजसम्म यो गाउँठाउँको भूतपे्रतलाई यही धामीले तह लगाएको थियो । के यो कुइरेमा जाइ लागेपछि भूतको पनि शक्ति बढेछ ? अन्ततः बिरामीको साइज र उसको दौलत देखेर धामीले ठूलै बोकाको आवश्यकता देखायो ।
धामीले चावल मुठ्याएर “गुनमुन गुनमुन….फु… ल यसलाई सालको पातमा बेरेर गोजीमा राखिराख्नु ।’ भनेर दाताको हातमा राखेपछि काम्न छोड्यो ।
Posted in Bakhat Bahadur Thapa
Tagged Bakhat Bahadur Thapa - Bikas Bakhat Bahadur Thapa's Nepali Story Bikas Literary work of Nepali Story Writer Bakhat Bahadur Thapa Literatures of Nepali Story Writer Bakhat Bahadur Thapa Nepali Author Bakhat Bahadur Thapa Nepali Katha Nepali Katha Bikas by Bakhat Bahadur Thapa Nepali Kathakar Nepali Kathakar Bakhat Bahadur Thapa Nepali Rachanakar Kathakar Bakhat Bahadur Thapa Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Bakhat Bahadur Thapa Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Bakhat Bahadur Thapa Nepali Story Nepali Story Bikas by Bakhat Bahadur Thapa Nepali Story Blog Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Bakhat Bahadur Thapa Sahityakar Bakhat Bahadur Thapa Ka Nepali Katha Haru